Ku talaabsiga Iskuxirnaanta Isgaarsiinta Warbaahinta | Martech Zone
Ku talaabsiga Iskuxirnaanta Isgaarsiinta Warbaahinta
Saturday, April 11, 2009 Talaado, Oktoobar 9, 2012 Douglas Karr
Waxaa jiray kal-fadhiyo aad u tiro yar goobta Webtrends Hawlgal 2009 Shirka taasi oo kahadashay awooda is dhexgalka xogta iyo saamaynta togan ay ku leedahay natiijooyinka ganacsiga. Shirkado badan ayaa kubilaabma naqshad aad u weyn oo datamart ah ka dibna gadaal ayey u dhaqaaqaan - iyagoo isku dayaya inay wax walba ka dhigaan qaabkooda xogta. Waa geedi socod cilladaysan maaddaama hawluhu si isdaba joog ah isu beddelaan… waligaa si guul leh uma fulin doontid tan iyo markii ay isbeddeleyso isla marka la qeexo
Craig Macdonald, madaxweyne ku xigeenka sare iyo sarkaalka madaxa suuq geynta Covario, wuxuu sameeyay dulmar guud oo aad ufiican oo ku saabsan sida loogu talaabsado Isuduwaha Suuqgaynta Suuqa. Bandhigga iyo fadhiga ayaa loo yeedhay CMO-ga Cusub: Dhiirrigelinta Suuqgeynta Iskutallaabta. Craig si faahfaahsan ugama uusan hadlin kanaal walba iyo howlaha socda, marka waxaan isku dayi doonaa inaan faahfaahin dheeri ah ka bixiyo aragtidayda hawsha.
Nidaamku wuxuu u wareegayaa yar yar ilaa weyn halkii uu ka noqon lahaa dhinaca kale. Xogta macmiilku waxay u qaybsan tahay ururada kanaalka oo dhan, nidaamyada, habsami u socodka. Kanaal kasta waa disc. Cajalladaha waxaa lagu daraa lafdhabarta. Ka dib marka lafdhabarta ay jirtey, lafaha ayaa lagu dari karaa, ka dibna hilibka lafaha, marka loo eego maqaarka hilibka, iwm Isbarbar dhiga guud, waan ogahay… laakiin way shaqaysaa.
Ku qeexida nidaamka kanaal kasta dhexdiisa waa talaabada ugu horeysa. Hal tusaale oo ah habka kanaalka ayaa ah tillaabooyinka ay rajadu ka qaaddo khadka tooska ah ee helitaanka meheraddaada iyo u beddelashada, Kanaalka Mashiinka Raadinta. Waxaa laga yaabaa inay ka bilaabaan mashiin raadin, ka dibna ay ku degaan bog, ka dibna dhagsii si aad ugu darto shay gaadhigii wax iibsanayey, ka dib dalab kooban, ka dibna bog beddelaad ah. Waa fure in la fahmo mashiinka raadinta ee laga helay…
Waa maxay ereyada muhiimka ah ee ay raadsadeen?
Muxuu ahaa bogga soo degitaanka ee ku saleysan ereyadaas muhiimka ah?
Maxay dhagsiiyeen si ay shayga ugu daraan gaadhigii wax iibsanayay?
Miyay badaleen mise ka tageen?
Browser, Nidaamka Howlgalka, Cinwaanka IP-ga, iwm.?
Dhammaan qeybahan xogta waxay muhiim u yihiin qiimeynta mashiinkaaga si aad u hesho qaybo wax ku ool ah oo aan waxtar lahayn oo waddo kasta ah. Cunsur kasta ama gabal kasta oo xog meta ah oo aad ka qaban karto safarka macaamilka waa mid daruuri ah sidaa darteed wax walba qabso, iyadoon loo eegin sida aan qiimo lahayn. Marka xogta la helo, ku habboonaanta kanaalka ayaa si fudud u fudud.
Marka geeddi-socod kasta oo gaar ah la qeexo, la qabto oo la habeeyo, xog-ururinta xogta ayaa ah tallaabada xigta. Dhexdhexaadinta xogta waxay u oggolaaneysaa shirkad inay hadda isbarbardhigto kanaalada, waxtarkooda, iyo tan ugu muhiimsan, sida mid channel uu u saameynayo kan kale. Miyaad cuni kartaa dadaalkaaga adoo lacag ku bixinaya lacag-gujinta-gujinta ereyada muhiimka ah ee aad horeyba ugu guuleysatay si dabiici ah? Nidaamkaaga wax iibsiga (qaali ah) miyay ku kaxaynaysaa dadka inay (qaali) u wacaan shirkaddaada halkii?
Iswaafajinta warbaahinta iskood ah ayaa lagama maarmaan u ah haddii shirkadaadu rabto inay hoos u dhigto kharashyada isla markaana ay dib ugu soo noqoto heer sare Waa dadaal kakan oo qaadan kara sanado (oo si isdaba joog ah isu beddelaya), laakiin marka qaybaha la meel dhigo, go'aannada waxaa lagu gaari karaa kalsooni. Kaliya maahan istiraatiijiyad ururada shirkadaha, kuwani waxay muhiim u noqon karaan ganacsiyada yaryar sidoo kale.
Craig wuxuu xusay in shirkaduhu ay si aad ah u hoos u dhigayaan ilaha loo baahan yahay si ay u gaaraan guulo wax ku ool ah oo ku saabsan isdhaafsiga warbaahinta. Wuxuu aaminsan yahay in ~ 10% kharashka suuqgeyntaada / IT-gaaga ay tahay inuu la xiriiro falanqeyn iyo habeyn. Taasi waa kiniin adag oo la liqo haddii aadan ku celin karin kharashkaas dib ula noqoshada maalgashiga. Shaki iigama jiro inay taasi macquul tahay, waxaan u maleynayaa inay tahay kiis digaag ama ukunta. Sideed qiil ugu heli kartaa 10% haddii aadan sameyn. Sideed uqabankartaa inaad 10% kubixiso mooyee
Waxaa laga yaabaa inaad ku dhex gasho maalgashiga markaad u gudubto geedi socodka waa furaha. Ku habboonaynta hal kanaal ayaa laga yaabaa inay ku siiso soo celinta loo baahan yahay si loo ballaariyo shaqaalahaaga iyo ilahaaga.
Tags: iskutallaabista kanaalkakanaalka suuqgeynta
Jeceshahay isbarbardhiga Doug, runti maahan wax guud ah, hab fiican oo looga fikiro qaab macquul ah, oo dabacsan. Waan ku raacsanahay inay si fiican u shaqeyso. Waxaan la yaabanahay imisa suuqley ayaa runtii ka fekeraya arrimaha sidan oo kale hadda ku jira dhaqaalaha hadda jira? Waa inay ahaadaan, laakiin sababo kala duwan awgood malahayga ayaa ah inaysan diiradda u saarin arintan sidii la rabay. Noqo mid xiise u leh akhristayaasha kale si ay ula jaanqaadaan dabeecadaha ku saabsan qabashada saxda ah isu-gudbinta warbaahinta? Qoraal wacan, waxyaabo fikir kicinaya.
Mahadsanid Chris! Mahadsanid inaad ku joogsato Waxaan jeclaan lahaa inaan ka maqlo suuqleyda kale sidoo kale! Waxaa jiray tusaalooyin yar oo ku saabsan shirka - xitaa ay ku jiraan dhexdhexaadiyaal sal ballaaran sida telefishanka iyo wargeyska. Waxay qaadataa xoogaa shaqo ah soo qabashada beddelaaddaas… ama lambarro gaar ah 1-800, lambarro qiimo dhimis ah, ama si aan kalsooni ku jirin u baaraya macaamiisha.
Wax kasta oo ganacsi ay sameyn karto si ay ula socoto dariiqa hore waxay sidoo kale fure u tahay istiraatiijiyadda.